Imithambo emi-6 yokuzilolonga ngokuchasene ne-Osteoarthritis ebalulekileyo yeWhereer (i-Oereoarthritis yeBala)
6 Ukuzivocavoca ngokuchasene ne-Osteoarthritis yeBala
27 / 02 / 2019 /0 Amazwana/i I-Osteoarthritis (Osteoarthritis), Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca/av ubuhlungu
Isifo sethambo samathambo egxalabeni sinokubangela iintlungu kwaye sinciphise ukuhamba. Nazi ezintandathu Ukuzivocavoca (kubandakanya i-VIDEO) kwabo bane-osteoarthritis (isifo samathambo) abanokuthi banciphise iintlungu banike intshukumo engcono.
I-osteoarthritis yamagxa ibandakanya ukunxiba ngokudibeneyo, ukubala kunye nokutshatyalaliswa kwe-cartilage egxalabeni- ezinokubandakanya iimeko ezincinci zendawo kunye neempendulo ze-episodic inflammatory. Oku kungahamba indlela ende kubomi bemihla ngemihla.
Isifo samathambo esisemagqabini sinokwenza ukuphakamisa iingalo zakho ngaphezulu kobude begxalaba kubuhlungu kwaye kunzima kakhulu. Ngenxa yoku, uhlala ufumana ukujikeleza kwegazi okuncinci kunye nentshukumo-ethi yona ikhokelele ekwandeni kwentlungu. Ezi zintandathu zokuzivocavoca-eziboniswe apha ngezantsi-zinokukunceda ukhulule iintlungu zamagxa kunye nokugcina ukuhamba kwamagxa.
Silwela wonke umntu onesifo esinganyangekiyo sonyango kunye ne-rheumatism ukuba abe namathuba angcono onyango kunye nophando - into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa. Njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube kwimidiya yoluntu ukuba usijoyine kumlo wokuphucula ubomi bemihla ngemihla kumawakawaka abantu. Kwakhona khumbula ukwabelana nenqaku (iqhosha ngezantsi kwenqaku).
Apha siza kukubonisa izinto ezintandathu zokuzivocavoca ngokunyanga isifo samathambo egxalabeni - enokwenziwa yonke imihla. Ukuqhubeka ezantsi kwinqaku, unokufunda izimvo ezivela kwabanye abafundi- kunye nokubukela ividiyo yoqeqesho kunye nokuzilolonga egxalabeni.
I-VIDEO: Imithambo emi-6 ngokuchasene neOsteoarthritis ebaluleke kakhulu (Osteoarthritis yeBhere)
Apha, i-chiropractor u-Alexander Andorff ubonise izinto ezintandathu esizenzayo kweli nqaku. Apha ngezantsi unokubona inkcazo eneenkcukacha zokuba imithambo kufuneka yenziwe njani kumanqaku 1 ukuya ku-6. Cofa apha ngezantsi.
1. Ukujikeleza kwamagxa
Umthambo okhuselekileyo kunye nobumnene ukuze ulungele wonke umntu. Lo msebenzi uyindlela efanelekileyo yokugcina izihlunu emagxeni kwaye zijikeleze amagxa egxalaba aqhubayo. Ukuzivocavoca kusebenza kakuhle ngaphakathi kwegxalaba-indawo enokuthi ichaphazeleke ngamaqhina emisipha kunye noxinzelelo.
Ukuphunyezwa kwemihla ngemihla koku kunokugcina ukuhamba phakathi kwamagxa kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi kwendawo. Ukusetyenziswa rhoqo kuya kukunceda uvule indawo yegxalaba kunye nokusombulula uxinzelelo lweemisipha.
Tsala amagxa asebusweni ngobumnene umva.
Bamba amagxa kunye kwaye ubambe isikhundla malunga nemizuzwana emi-5 ukuya kweli-10.
Phinda umthambo izihlandlo ezi-5 ukuya kwezi-10 kwiseti ezi-3.
2. Ukuphakamisa iinyawo
Umthambo olula nolungileyo. Eyona njongo iphambili yokuzivocavoca kukunyusa intshukumo ngaphakathi kwegxalaba kunye nokuphucula ukuhamba kwegazi kwimisipha yengingqi. Ukusetyenziswa rhoqo kunokunceda ukuthambisa ixesha lakho kunye namagxa abuhlungu.
Emva koko uphakamise kancinci igxalaba elinye kwaye ulawulwe ukunyakaza kokuphela.
Emva koko yehlisa yonke indlela kwakhona
Phinda umthambo amaxesha ama-5-10 ngaphezulu kweeseti ezi-3.
3. Phambili kwiSetyhula yeNgqondo
Esi sisenzo esikwabizwa ngokuba yinxalenye yenkqubo yokuhamba yeCodman - apho ikwasetyenziswa ngokuchasene nokuncina egxalabeni kunye negxalaba elinomkhenkce. Umthambo ke uhlala uhleli usetyenziselwa ukwenza igalelo ekushukumeni okungaphezulu kunye nokuhamba egxalabeni.
Ngaba uyazi ukuba ukungasebenzi kakuhle kwamagxa kunokubangela iintlungu zentamo? Umsebenzi wegxa kunye nentamo unxulunyaniswe ngokusondeleyo kwaye igxalaba elincinci lokuhamba linokubangela intamo kunye nemisipha yentamo ibe lukhuni kwaye ibenzima. Uninzi lwezihlunu zasemahlombe zinamathele ngokupheleleyo entanyeni yakho.
Kwenziwa rhoqo kwezi ziqheliso zingasentla kuya kunceda ukujikeleza bhetele kwiimisipha ezixineneyo, imisipha kunye namalungu aqinile. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba zizondlo ezikujikelezo lwegazi lakho njengesixhobo sokwakha isihlunu kunye nokulungiswa kwamathambo.
Ukuma. Xhasa ingalo enye yesihlalo okanye efanayo.
Zondelela phambili (malunga nama-30 eedigri).
Isingise ingalo ijongise ngqo ezantsi kwaye ke emva koko uyiqale ngokujikeleza ingalo.
4. Ukujikeleza kwangaphandle
Uninzi lwabantu luyayilibala indlela ebalulekileyo yokujikeleza. Umzekelo, Ngaba ubusazi ukuba ukujikeleza amagxa ngokuvula ngokuthe ngqo kukudibana kwamagxa kwaye kunegalelo kuphuculo lweendawo?
Yiyo kanye le nto le nto uyenza lo msebenzi sincomekayo ukuba unengxaki yokuhamba kancinci kwamagxa.
Ndilale ngomhlana phezu koqeqesho,
Bopha umqolo wakho uye kuthi xhaxhe nge-90 degrees angle. Ingalo kufuneka isondele emzimbeni.
Emva koko vumela ingalo negxalaba lakho lijikelezise ngaphandle-kangangoko unako.
5. I-Lumbar Arm Lift
Umthambo omkhulu wokunika ukuhambisa okungcono kuyo yonke indawo yamagxa. Uninzi olunentlungu yamahlombe ikakhulu luqaphela ukuba ukuphakamisa iingalo ngokuthe tye ngaphezu kwegxalaba ukuphakama kunokuba yingxaki enkulu. Lo msebenzi unokukunceda kule ngxaki.
Lala ngomqolo wakho kwinto yoqeqesho.
Beka iingalo zakho ecaleni.
Phakamisa iingalo zakho kancinci uye phezulu-kangangoko unako (kubhetele ude ufike emhlabeni).
Thobisa iingalo zakho zibuyele kwindawo yokuqala.
Umthambo wenziwa uphindaphindwe kalishumi kwiseti ezi-10.
6. Ukuhamba ngesisindo sokukhanya
Lo ngumthambo owenza igalelo kwindawo engcono ngaphakathi egxalabeni. Ngokusebenzisa isisindo sokukhanya (uhlobo ezimbini ukuya kwezihlanu zeekhilog) uya kufumana kwakhona ukukhanya okukuthi kuncede ukwolula ikhaphetshu edibeneyo kunye nezihlunu zekhaya.
Yima uxhaswe ngengalo enye esitulweni - enye ixhomeke nkqo phantsi inobunzima obusezandleni.
Emva koko jika ingalo yakho kwimithambo ye-pendulum-ngapha nangapha.
Misa uhambo kwangoko ukuba uziva iintlungu.
Uninzi lwabantu abaneentlungu ezingapheliyo zichaphazeleka yi-osteoarthritis (isifo samathambo) ezinqeni nasemadolweni. Kwinqaku elingezantsi ungafunda ngakumbi ngezigaba ezahlukeneyo zesahlo samadolo kunye nokuba imeko ikhula njani.
Kwakhona, sifuna ukwenza njalo buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho (zive ukhululekile ukunxibelelana ngqo nenqaku). Ukuqonda kunye nokwanda kokugxila linyathelo lokuqala eliya kubomi obungcono bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/slitasjegikt-i-skulderen.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-02-27 21:03:482021-03-24 13:25:156 Ukuzivocavoca ngokuchasene ne-Osteoarthritis yeBala
Ukuziqhelanisa neentshukumo ezi-5 kwabo bane-Fibromyalgia Iintlobo ezi-7 zeFibromyalgia Pain